Arsii Lixaa Shaallaatti Jeequmsi uumame lubbuu balleesse - Mootummaa | Horn Affairs Afaan Oromo
By Curated Content on February 16, 2016
Godina Arsii lixaa aanaa Shaallaatti gochi jeeqamsa uumuun lubbuu namaa balleesse fincila humna hidhateen raawwatame akka ta’e mootummaan Itiyoophiyaa beeksiseera.
Godina Arsii Aanaa Shaallaatti humnoonni farra Nagaa dhimma Amantaa fi Saba irratti xiyyeeffateen jeeqamsa uumuuf akka yaalan maddawwan naannichaa himaniiru.
Jeeqamsa kanaan qabeenya bosona Mootummaa fi oyiruu akkasumas Dhaabbilee Amantaa irratti akka xiyyeefatame kan eeran Obbo Getaachaw gocha kana keessaa Mankaraarsitoonni harka akka qaban mallattoowwan mul’isan akka argaman beeksisaniiru.
Wayita ammaa naannichatti Nagaan akka bu’eefi humnoota gocha fincilaa fi yakkaatti hirmaatan too’annoo jala oolchuuf hojjetamaa akka jiru himan.
Shakkamtoota hafan adda baasuudhaan too’annoo jala oolchuufiis Mootummaan hordoffii cimaa taasisaa akka jiru obbo Getaachaw beeksisaniiru.
Mootummaan gocha raawwatameef mallattoon mankaraarsitummaadha jedhus ka’umsi rakkoo mudatee guutumaa fi guutuutti isa kanadha murtee jedhurra hin geenye kan jedhan ministirichi hawaasni kaayyoo Siyaasaa Dhiphaa fi Mankaraarsitummaa irraa akka of eeguuf hubachiisaniiru.
Maddi oduu kanaa: Fanabc